कोही पुच्छर सहित जन्मिए कसैको नाभि नै छैन, ९ सेलिब्रेटीका चाखलाग्दा कुरा - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
कोही पुच्छर सहित जन्मिए कसैको नाभि नै छैन, ९ सेलिब्रेटीका चाखलाग्दा कुरा
१० जनवरी १९७४ मा जन्मेका ऋतिक रोशन ४३ बर्षका भए । ऋतिकको हातमा ६ वटा औँला छन् भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छ । उनको दाहिने हातको बुढी औँलासँग अर्को एउटा औँला जोडिएको छ जसलाई उनी एकदमै लक्की मान्छन् । ऋतिक बाहेक अन्य केही सेलिब्रेटीका शरीरमा पनि एउटा न एउटा खराबी छ । जसका बारेमा आज हामी एक सामाग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ ।
पुच्छरसहित जन्मेकी थिईन् केशा
हलिउड गायिका केशाको जन्म पुच्छर सहित भएको थियो । उनले एक अन्र्तवार्तामा आफू जन्मदा पुच्छर भएको पुष्टि गरेकी थिईन् । पछि अप्रेशन गरेर उनको पुच्छर फालिएको थियो ।
चेकोस्लोभाकियाकी मोडल कारोलिना कुर्कोवाको गन्ती फेशनको दुनियाँकी सुन्दर मोडलको रुपमा हुन्छ । उनको सुन्दरतामा धेरै फिदा छन् तर उनको शरीरमा एउटा कुराको कमी छ । उनको नाभि नै छैन ।
अमेरिकन अभिनेत्री केट बोसविरथको बारेमा जान्दा तपाईँ चकित पर्न सक्नुहुन्छ । उनका दुई आँखाको रंग नै फरक छ । उनको एउटा आँखाको रंग खैरो छ भने अर्को आँखाको रंग निलो छ ।
चर्चित अभिनेत्ती एलिजावेथ टेलरका बारेमा धेरै कमलाई मात्रै थाहा होला । उनको सुन्दरताका बरोमा त धेरैलाई थाहा छ । उनको आँखामा डबल आई लेशेज थिए । यहि कारण उनका आँखा निकै सुन्दर देखिन्थे ।
अमेरिकन टेलिभिजन स्टार एलिजाबेथ ब्रेकलीका आँखाको रंग पनि फरक–फरक छ । उनको एउटा आँखाको कलर हरियो छ भने अर्को आँखाको कलर हरियो र खैरो मिसिएको छ ।
अमेरिकन पत्रकार रिचर्डको एउटा हातका सबै औँला खराब छन् ।
हलिउड अभिनेत्री हेल बेरीको खुट्टामा पनि ६ वटा औँला छन् । हेली हलिउडकी नामी अभिनेत्री हुन् ।
अमेरिकन प्रोफेशनल डेनी गार्सियाको देब्रे खुट्टामा ६ वटा औँला छन् ।
टेलिभिजन प्रस्थतोता ओपरा विनफ्रेको पनि देब्रे खुट्टामा पनि ६ वटा औँला छन् ।
आफ्नै कारण फिल्म बिहिन भए ऋतिक !
अभिनेता ऋतिक रोशनले यशराज ब्यानरको ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’ रिजेक्ट गरेका थिए । यस सिनेमामा पारिश्रमिक र नाफाको कुरा नमिलेर उनले काम नगर्न..
अपरिचित व्यक्तिले दिशालाई दिए तनाव, प्रियंकाले हानिन् थप्पड
के ऋतिक र सुजैन हुँदैछन् एक ?
कंगना भन्छिन्– ‘धम्की दिँदै ऋतिकले मेरो करिअर बर्बाद पार्न खोजे’
ऋतिकसहित यी हुन् आँखा दान गर्ने बलिउड सेलिब्रेटी
ऋतिकको काबिल पाईरेसीको शिकार, तब्बुले गरिन् बिद्यालाई रिप्लेस– आजको बलिउड अपडेट